SIDA LOO URURIYO BAALALKA BADDA: WAQTIGA, QALABKA, FIKRADAHA IYO XIRFADAHA - BEERTA
Sidee si dhakhso ah u soo uruurisaa buckthorn badda: Talooyin iyo tabaha
Buckthorn badda waa mid aad u dhadhan fiican leh, karis iyo bakeer caafimaad leh, laakiin dad badan isaga gudbiya, sababtoo ah waxay si fudud ma garanayaan sida iyo waxa laga saaro laanta. Xaqiiqdii, ma aha wax walba waa mid aad u adag, dadka ayaa muddo dheer ka fikiray siyaabo badan oo tan loo sameeyo.
Meelaha cimilada ee cimilada kala duwan, waqtiga bislaanshaha ee buckthorn badda ayaa laga yaabaa, kala duwan, siday u kala duwanaan doonaan iyo waqtiga goosashada. Si aad u goosataan ka soo buckthorn badda u jeesteen dhadhan fiican oo faa'iido leh, waxaad u baahan tahay inaad fahamto oo xusuuso marka ay ka fiican tahay in goosashada.
Ku xigta buckthorn badda ma aha mid ku habboon beerto raspberries, currants madow iyo strawberries - waxay cadaadin doonaa midba midka kale. Sidoo kale, boqoshaada, yaanyada iyo bataatadu waa waxyeelo.
Haddii aad qorsheyneyso inaad ka samaysatid compote ama macaanka, ka dibna dalaggu wuxuu bilaabmi doonaa maalmaha koowaad ee Sebtembar, marka midhaha ay jaale yihiin oo ay ku jiraan casiir yar. Haddii la kariyo juice, macaanka ama marmalade ayaa la qorsheeyey, waxaa ka wanaagsan inaad sugto dhowr toddobaad la goosashada marka laamaha geedku u jeedaan oranji.
Baashka badda waxaa sidoo kale loo yaqaannaa berry-pill, sababtoo ah helitaanka baahida maalinlaha ah ee fiitamiinada, kaliya hal qaado oo ka mid ah "kiniin" sida waa ku filan.
Ma taqaanaa? Giriiggii hore, buckthorn badda waxaa loo yaqaan "faras qurxoon." Xayawaankii duufaankii dhagaxaan ku dhuftay, oo maqaarkoodii iyo dubkoodii ayaa bilaabay inay candhuuf ku tufaan.
Sidee si dhakhso ah u soo qaadaan buckthorn badda: qalab goynta
Buckthorn badda waxay magaceeda u bixisay dhalid aad u sarreeya - berry ayaa si aamusnaan ah u dulqaamaya laamaha iyo garbaha. Laakiin ma fududa in la ururiyo, sababtoo ah baadiyaha waxay leedahay qodxo badan, oo miro ayaa si adag u fadhiisanaya laanta si ay u suurtogasho in ay meesha ka saarto oo aan u burburin iyada oo aan xirfad gaar ah.
Beeraha soo socda ayaa si taxadar leh u baaray su'aasha ah sida loo soo ururiyo buckthorn badda si deg deg ah oo ay la yimaadaan qalab badan si loo fududeeyo geedi socodka.
Viburnum, juniper, salad baraf ah oo la cuni karo, miro yar yar, miraayad madow, buluug, blueberry, yoshta, amiir, cirku wuxuu kuugu farxi doonaa miro iyo caafimaad leh haddii aad beertaada ku korinayso.
Fure u ururinta
Si loo dhigo berry inta lagu jiro ururinta oo aan dhulka ku dhicin oo aan wax khasaarin, waa wax fudud in la sameeyo shabakada gaarka ah. Si aad tan u sameyso, qaado silig qaro weyn oo garaac leh giraanta, dhexroorka taas oo ah ugu yaraan 60 cm Foornada, faashadda ama polyetylen waa la gooyaa giraanta, ka dibna mid ka mid ah dhinacyadiisa ayaa loo jeexjeexay si uu ugu habboonaado laabta, iyo cajalad labada dhinac ah. Nidaamka noocan oo kale ah ayaa lagu dhegaysanayaa qoorta, dalaggu si toos ah ayuu u dhacaa, oo ma aha dhulka.
Haddii goobta ay koraan dhowr duurka ee qurux-this orange this, ka dibna si ay u ururiyaan berry ah buckthorn badda, waa mid khuseysa qaabka lakabka laanta. Isku-shuban fiiqan si taxadar leh u jarjarida laanta, ka tago 5cm ka jirridda, ka dibna jeexjeexa miro ka iyaga. Thanks to habkan, dhirta ayaa dib loo noolaado isla waqtigaas, sababtoo ah sanadka soo socda caleemaha dhalinyarada ayaa ka muuqan doona bogagga jarista.
Waa muhiim! Cawska la soo ururiyey lama dhaqi karo, sida ay u burburaan iyo u dillaacaan. Aad bay uugu fududaanaysaa habeenkii si aad ugu dhaqdo geedka tuubada.
Goynta waxaa sida caadiga ah la sameeyaa iyadoo la isticmaalayo xargaha ama xargaha wareegsan, iyo sidoo kale tuubo madow.
Slingshot - Tani dhab ahaantii waa xayawaan carruur ah oo leh xarig, xadhig ama kalluumeysi. Tani "xarig" ayaa la qaadaa laanta, iyo berry waxay ku dhacaan iyagoo ku faafaya saldhigyo shidaal ah ama saxaro qabow.
Wire loop, Caanaha loo yaqaan "cobra" qaabkeeda - xadhig xadhig ah oo ku dheggan tuubka alwaax, caarada kaas oo la siinayo qaabka dabka shamaca gubanaya. Qalabkani fudud iyo qalab maahan mid fudud si uu u helo berry, xitaa on laamaha la heli karo liita.
Qalabka la midka ah saafi yar, waxaa laga samayn karaa gabal gabal iyo boorso balaastig ah. Si aad tan u samayso, u qaado karbaash ama qalab aan loo baahnayn oo qasac ah, ku dheji tuubada, taas oo qiyaastii 10 cm dheer, iyo dhexroorku wax yar ka weyn yahay cabbirka berry. Qeybta hoose ee tuubada si aad ugu duubto cajalad ama cajalad ku duub oo ku rid boorsada. Tuubadu waxay dhex maraysaa laanta, xoogaa cadaadis, bacariga badda waa bacda.
Waa muhiim! Haddii ujeedada beeraleyda goosashada ay tahay in la diyaariyo casiirka, ka dibna waxaa la samayn karaa iyada oo aan laga gooyin geed. Gacmaha gashiga gacmahaaga ku qabo, tuujin juuska si toos ah laanta, ka dibna xaddid.
Beeraha qaarkood waxay isticmaalaan shanlada la yiraahdo qoryaha ama balaastiga ah goosashada, iyaga oo shakhsi ahaan ama iibsanaya. Dhinaca isgoysyada dhamaadka ilkaha dhaadheer, oo ka gudubta caleemaha, iyo berry ayaa la saaraa. Laakiin habkani ma aha mid wax ku ool ah sida kuwii hore, maaddaama cayayaanka noocan ah ay fududahay in waxyeello la gaarsiiyo.
Frost si aad u goosato
Habka ugu caansan uguna fiicnaadu waa inuu sugo illaa berry ay si fiican u qaboojinayaan geedka, oo kaliya rux iyaga oo halkaas ka socda ilaa gogoldhigga ka hor. Run, waa inaan isla markiiba xallinno, iska tuur qashinka, caleemaha iyo berry oo la burburiyo.
Iyadoo soo go'ay miro badan iyo tiro badan oo duurka ah, qaabkani waa midka ugu fudud oo ugu dhaqsaha badan. Run, miro ayaa soo ururiyay habkan waxay ku habboon yihiin oo kaliya kaydinta dheeraadka ah ee foomka barafaysan.
Sidee loo soo ururiyaa baaluga badda: Talooyin waxtar leh iyo khiyaamo
Halkan waxaa ku qoran talooyin kaa caawinaya inaad si sax ah oo dhaqso ah u soo qaadato berry:
Uruurinta buckthorn badda ayaa ugufiican in laga bilaabo xagga sare ee madaxa iyo si tartiib tartiib ah u guurto laanta hoose.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu shaqeeyo gacmo-galmo raaxo leh iyo faashad laga sameeyey dhar qaro weyn, maadama miirta biyaha bakeeriga ah ay keeni karto xasaasiyad, waana mid aad u adag in la dhaqo.
Haddii aad go'aansatid inaad isticmaasho habka kudunka ah ee soo qaadashada berry, waa inaad jebisid oo aad u ogolaataa geedka dabiiciga ah. Laakiin way ka fiican tahay inaad diiddo habkan, si aan loo gooyin geedka.
Ma taqaanaa? Gawaarida badda waxay ahayd qalabkii ugu horreeyay ee loo isticmaalay in lagu daweeyo cawaaqibka burburkii Chernobyl ee 1986.
Shaki la'aan, faa'iidooyinka laga soo qaatay isticmaalka buurrada caanaha-kiniiniga, oo ka badan lacag bixinta dadaalka loogu talagalay diyaarinta. Wax kasta oo aad isticmaasho, jirkaaga ayaa markasta ku dhihi doona mahadsanid hadiyad ahaan. Markaad ogaatid sida si habboon loo soo ururiyo buckthorn badda, waxaad ku raaxaysan kartaa dhadhanka wanaagsan iyo caraf udgoon leh sannadka oo dhan.
Xeerarka iyo sifooyinka ukunta ee ukunta ducada guriga
Sifooyinka khudaarta hodan ah: shimbiraha beeritaanka yaanyada ee furan iyo sifooyinka daryeelkooda
Waa maxay isticmaalka xididka topinambur? Faahfaahinta sawirrada, guryaha, cuntooyinka daawooyinka dhaqameed iyo ka hortagga
Qaxwaha joodariga: goorta la ururiyo, sida loo qalajiyo iyo sida loo sameeyo shaaha
"Falsi Hudheel" - yaanyo jilicsan oo leh dhalid sare
Dooro soosta guga
Qeybinta dhalashada ee rhizome
Dadku waxay beeraan beeraha si ay u qurxiyaan quruxda guga iyo xagaaga, iyo dayrta si ay u helaan goosashada wanaagsan ee miro khafiifa. Haddii cayayaanka ku nool yihiin jardiinooyinka, waxaad lumin kartaa miraha, iyo xataa beerta laftiisa. Dhirta geedaha, iyo sidoo kale geedo kale oo badan, ayaa loo arkaa inay yihiin cadawyo aad u halis ah. Tufaaxa iyo noocyada bariga ayaa ah nooc isku mid ah. Read More
Qaababka isticmaalka korriinka koritaanka dhirta "Vympel"
Dhammaanba ku saabsan caleenta digaagga Cuckoo Mechelen Malin: sharaxaad, astaamo, sawiro
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beerta 2019